Warbixin: Waa sidee caawa xaaladda Guriceel, halkeesa la kala joogaa? - Caasimada Online
Home Warar Warbixin: Waa sidee caawa xaaladda Guriceel, halkeesa la kala joogaa?
Guriceel (Caasimada Online) – Waxaa fiidkii hore ee caawa si iskiis ah u istaagay dagaalka u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Ahlu-Sunna ee ka socda magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud, kaas oo socday seddaxdii maalmood ee lasoo dhaafay, isla markaana sababay khasaare aad u badan.
Hase yeeshee xogta rasmiga ah ee ka madaxa banaan labada dhinac oo Caasimada Online ay ka heshay Guriceel waxay tilmaameysaa in dhinacyadu ay kala joogaan dhufeysyadii xalay, waxayna isku hor-fadhiyaan Isbitaalka Cubeyd illa Dabaqa Erkolle.
Wararka ay Caasimada Online ka heleyso dagaalka Guriceel waxay intaas ku darayaan in dowladda Soomaaliya waxay weli Muqdisho ka soo daabuleyso ciidan hor leh oo ka tirsan Gorgor, waxaana maanta Garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho diyaarado looga qaaday cutubyo hor leh oo ka tirsan Gor Gor.